2.1 Ny fiantsoana
3.1 Ny vanimpotoampitondrana voalohany
3.2 Ny vanimpotoampitondrana faharoa
Noho ny fahalavoana, dia nahazo ny fahalalana ny tsara sy ny ratsy ry Adama sy Eva, ary izany dia no­meny holovain’ny taranany, dia ny taranak’olombelona. Noho izany, ny fahatsiarovan-tena dia nan­jary afaka namoaka fitsarana ara-môraly, ka dia tonga tamin’ny zanak’olombelona ny an­drai­ki­tra hanao ny tsara sy hiala amin’ny ratsy. Io vanimpotoampitondran’ny Fahatsiarovan-tena io dia na­nomboka tamin’ny nahavoaroaka an-dry Adama sy Eva avy tao Edena ka hatrany amin’ny Sa­fo­drano ; tsy nisy fitondrana na lalàna, nandritra io vanimpotoampitondrana io. Ny niafarany dia “ny nofo rehetra samy efa nanimba ny làlany avy, tambonin’ny tany” ary “be ny faharatsian’ny olona tam­bonin’ny tany, ka izay fisainana rehetra avy amin’ny fony dia ratsy ihany, mandritra ny andro.” Noho izany, io fizahan-toetra faharoa nisedrana ny olona voajanahary io, dia no­fa­ra­nan’An­dria­ma­ni­tra tamina fitsarana : tonga ny Safodrano.
3.3 Ny vanimpotoampitondrana fahatelo
3.4 Ny vanimpotoampitondrana fahefatra
3.5 Ny vanimpotoampitondrana fahadimy
Tonga indray ny fahasoavan’Andriamanitra, namonjy ny olombelona tsy nahita hatao intsony, ary na­na­votra (nanafaka) ilay vahoaka voafidy (Israely) ho afaka tamin’ny tanan’ny mpangeja azy. Na­na­raka izany, tany an-taniefitr’i Sinay, dia naroson’Andriamanitra tamin’izy ireo ny fanekena amin’ny la­là­na. Tsy nangataka tam-panetrentena ny hanohizana ny fanekena fahasoavana ny vahoaka, fa na­maly tam-patokiantena hoe : “Izay teny rehetra nolazain’i Jehovah dia hataonay.” Kanefa ny tan­ta­ran’i Israely tany an-taniefitra sy tany Kanana, dia tantara lava momba ny tsy fanajana mi­ba­ri­ba­ry sy tsy misy fiafaràny ny lalàna. Taorian’ny fampitandremana tsy tambo isaina, dia no­fa­ra­nan’ An­dria­ma­ni­tra io vanimpotoampitondran’ny lalàna io, izay fisedrana ny olombelona tamin’ny la­là­na, no­fa­ra­na­ny tamin’ny fitsarana, dia ny fandefasana sesitany ny vahoaka tany an-tany hafa sy ny fa­­ne­le­za­na azy ireo tany amin’ny jentilisa. Marina fa nisy sisa tavela kely, niverina, tamin’ny andron’i Ezra sy i Nehemia, ary teraka avy tao amin’io i Kristy, tamin’ny fotoan’androny, nefa dia nifarana ta­min’ny fanomboana an’i Kristy io vanimpotoampitondran’ny la­làna io, ary naely ny vahoaka ma­non­tolo.
3.6 Ny vanimpotoampitondrana fahenina
3.7 Ny vanimpotoampitondrana fahafito
4.5.1 Tsy tokony hafangaro amina toetra tsotra maha-Andriamanitra Azy
· Ireo mpanoratra masina dia miresaka mandrakariva ny fahafatesan’ny mpino ho toy ny fan­de­ha­na­ny. Na aiza na aiza, ny fiverenan’ny Tompo dia tsy ampifandraisina amin’ny fa­ha­fa­te­san’ ny kristiana iray (jereo Filipiana 1. 23 ; 2 Timoty 4. 6 ; 2 Korintiana 5. 8). Stefana, rehefa ho faty, dia nahita ny lanitra nisokatra ary ny Zanak’olona —tsy tonga, fa “MITSANGANA eo an­ka­va­nan’An­driamanitra” (Asa 7. 55-56).
4.5.5 Ny nanapotehan’ny Romana an’i Jerosalema
Tsy maintsy hazonina mafy fa ny foto-pampianarana momba ny fitsanganana amin’ny maty dia mi­ka­sika ny vatan’ireo izay maty. Ny fanahy niala tamin’ny vatana dia tonga eo no ho eo amin’ny toe­ram-pahasambarana na toeram-pijaliana (Filipiana 1. 23 ; 2 Korintiana 5. 8 ; Lioka 16. 22-23).
“Fa Kristy koa, aza, efa nijaly indray mandeha noho ny ota, ny Marina hamonjy ny tsy marina, mba hiton­dra antsika ho amin’Andriamanitra” (1 Petera 3. 18).
“Kristy nanavotra anay tamin’ny ozon’ny lalàna, satria tonga voaozona hamonjy anay Izy ; fa voa­so­ra­tra hoe : ‘Voaozona izay rehetra mihantona amin’ny hazo’ ” (Galatiana 3. 13).
“Izay tsy hain’ny lalàna, satria ny nofo no nahalemy azy, dia vitan’Andriamanitra, tamin’izy naniraka ny Zanany, naka ny endriky ny nofo ota sy ny amin’ny ota, ka nanameloka ny ota tao amin’ny nofo” (Ro­mana 8. 3).
“Mba hohamarinina amin’ny fahasoavany isika, ka ho tonga mpandova araka ny fanantenana ny fiai­nana mandrakizay” (Titosy 3. 7).
Araka ny filazan’ny zokiolona Bunyan : “Amin’ny alalan’ny finoana ny Tompo Jesoa, ny mpino dia voa­ro eo ambanina fahamarinana tanteraka sy masina, hany ka io lalàna mirefodrefotra teo amin’ ny Tendrombohitra Sinay io, dia tsy hahita fahadisoana na tsy fahatanterahana, na dia kely akory aza, ao aminy. Izany no atao hoe NY FAHAMARINAN’ANDRIAMANITRA, TSY MISY NY LALÀNA.”
“Teo amin’ireo [zanaky ny tsy fanarahana ireo] no nitondrantsika rehetra tena koa, fahiny, tamin’ny fi­làn’ny nofontsika, ka nanaovantsika ny danin’ny nofo sy ny saina ; ary araka ny toetrantsika, dia za­na­ky ny fahatezerana toy ny sasany koa isika” (Efesiana 2. 3).
Fanavahana iray faran’izay mavesa-danja, tokony hatao, hahazoana tsara ny Soratra Masina, in­drin­dra ny epistily, dia ny “toerana misy ny mpino”, sy ny “tena toetra iainany”, na “ny fandehany”. Ny toerana misy azy, dia vokatry ny asan’i Kristy ; lavorary izany, ary tanteraka raha vao raisina amin’ ny finoana i Kristy. Tsy misy na inona na inona, eo amin’ny fiainan’ny mpino aorian’izany, hanampy, na inona na inona, amin’ny zony hankasitrahan’Andriamanitra azy na amin’ny fiarovana tonga la­fa­tra azony. Io toerana eo imason’Andriamanitra io, dia azo avy amin’ny finoana irery ihany ; ary eo anoloan’Andriamanitra, ny olona faran’izay osa, raha tena mino ny Tompo Jesoa Kristy, dia mitovy zo tanteraka amin’izay olo-masina malaza indrindra.
9.3 Fampirisihana ny kristiana eo amin’ny fiainany andavanandro,
Mora ny manampy maro amin’ireo andininy ireo, mampitaha ny fanavahana ataon’ny Soratra Ma­si­na mom­ba ny toerana misy ny mpino sy ny tena toetra iainany. Tsy zahàn-toetra tsy akory ny mpino, ha­ha­fantarana na mendrika izy na tsia, hahazo io toerana faran’izay avo io ; fa, rehefa manomboka mi­aiky ny tena tsy fahamendrehany tanteraka izy, dia mandray avy hatrany io toerana izay vokatry ny asan’i Kristy io. Ny toerany, indray, dia efa tanteraka “ho mandrakizay” (Hebreo 10. 14), fa rehefa mi­jery ny ao anatiny izy, izany hoe ny tena toetra iainany, dia tsy maintsy milaza fa : “Tsy toy ny efa na­hazo sahady aho, na efa tanteraka sahady” (Filipiana 3. 12).
“Fahasoavana no namonjena anareo, amin'ny finoana ; ary tsy avy aminareo izany, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra ; tsy avy amin'ny asa, fandrao hisy hirehareha” (Efesiana 2. 8-9).
11.2 Ny mpino dia omena valisoa